Home > Torohevitra toro-lalana amin'ny lamasinina > Top 5 Romantic indrindra Train dian'i In Eoropa
Na efa nivady nandritra ny taona maro, na mbola tany am-piandohan'ny dingana ny fifandraisana, mpivady rehetra afaka mandray soa amin'ny kalitaon'ny fotoana iarahana. Tena tsara indrindra mba hanao ezaka ho an'ny andron'ny mpifankatia. Nandeha lamasinina no tonga lafatra ny fomba hanombohana sy ny tantaram-pitiavana volan-tantely getaway amin'ny havanao. Hanafaingana mangina ny alalan 'ny ambanivohitra na ny any an-tendrombohitra. Traverse lasa mahafatifaty, tanàna fahiny, na manamorona ny morontsiraka ny glacial farihy. Ireto ny ambony 5 tantaram-pitiavana indrindra lamasinina nandehanany any Eoropa. Tsirairay dia manolotra zavatra manokana ho an'ny andron'ny mpifankatia.
London ny Venice no dianay voalohany amin'ny lamasinina lamasinina voalohany
izany fiaran-dalamby dia hahatonga ianao sy ny havanao amin'ny maitso mavana ambanivohitra. Avy eo ianao lasa ny mahavariana manakodiava tendrombohitr'i Soisa sy Aotrisy. Manaraka, hiaina ny toerana mahafinaritra indrindra amin'ny Verona any Italia ianao amin'ny alàlan'ny lalamby alohan'ny ahatongavanao amin'ny moron'ny Grand Canal Venetian.
Miresaka amin'ny fiaran-dalamby ao Frantsa ianao dia hiseho amin'ny loko sy hazavana malaza eo amin'ny firenena. Avy volomparasy lavender saha tamin'i Cote d'Azur rano manga. Talanjona ny fomba izay ny volamena masoandro-pahagagana immerses rehetra, ianao in ho Fifaliana. Nanomboka tao amin'ny tantaram-pitiavana indrindra tanàna rehetra, Paris, ny rail dia handeha manonofinofy toy mampivarahontsana dranomasina ny torapasika. Ianao koa jereo tanàna kely mahafinaritra ary ny tanamasoandro ary lavender saha ny Provence.
Afaka mandeha amin'ny lamasinina ianao eo anelanelan'ny tanàna roa mahafinaritra, rehefa mivelatra ny tanànan'ny Italiana mahafinaritra rehefa mandalo ny varavarankelinao. Azo antoka dia iray amin'ireo tantaram-pitiavana indrindra lamasinina nandehanany any Eoropa.
Ity fizarana kely ny lalamby manompo ny dimy Italiana Riviera vohitra an'ny Cinque Terre tamin'ny fomba mampivarahontsana tokoa. Ny fiaran-dalamby diany dia latsaka ny adiny iray lalana, dia haka ny fiaran-dalamby fomba iray. Avy eo dia afaka handany ny andro tongotra lavitra ny mahagaga-tanàna lalana indray mampifandray ny toerana nanomboka. izany fiaran-dalamby dia Tena mahatalanjona amin'ny fomba fijery ny Ranomasina Ligurian, miloko tanora tanàna, terraced tanim-boaloboka ary koa ny sehatra mavitrika.
Atombohy ny tantaram-pitiavana lamasinina handeha any Zurich. Visit Bahnhofstrasse, iray amin'ireo tena tsara tarehy eny an-dalambe fiantsenana eto amin'izao tontolo izao, ary mividy fahatsiarovana. Talanjona ny niavaka asa Van Gogh sy Monet amin'ny tena tia Kunsthaus kanto Gallery. Betsaka ny zavatra azon'ny mpivady atao ao Zurich alohan'ny hidirany ao amin'ilay toerana mahafinaritra mitaingina fiaran-dalamby ho Innsbruck. Nandeha tamin'ilay banky ny Lake Zurich manoloana ny miavaka Alpine toerana manodidina. Ianao koa dia handeha hamaky tendrombohitra tsara tarehy sy mahafinaritra ny kijana fahitana. Inona no mety ho kokoa ny tantaram-pitiavana?
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftop-5-romantic-train-journeys-europe%2F%3Flang%3Dmg- (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
#olon-tiany London tantaram-pitiavana romanticdestinations travelflorence travelnice travelparis travelrome travelvenice